Aragtida dhallinyarada ee baaqashada shirka arrimaha doorashooyinka ee 15-ka bishan loo muddeeyay – Kalfadhi
Aragtida dhallinyarada ee baaqashada shirka arrimaha doorashooyinka ee 15-ka bishan loo muddeeyay
February 15, 2021 February 15, 2021 Hassan Istiila
Maanta oo ah 15-ka bisha Febraayo waxaa ay ku beegneyd maalintii Madaxweyne Farmaajo uu iclaamiyay in shirka wadda-tashiga arrimaha doorashooyin lagu qabto magaalada Garowe, balse maanta shirkaasi wuu baaqday, kaddib markii Puntland ay ku adkeysatay in shirka lagu qabto Muqdishu.
Jubbaland ayaa dhankeeda ku raacday maamulka Puntland, waxeyna soo jeedisay in shirka lagu qabto Mogadishu. Maxamed Yusuf, oo kamid ah dhallinyarada sannadka dooneysa kamid noqoshada Baarlamaanka ayaa Kalfadhi.com u sheegay in ummadda Soomaaliyeed aysan dan ugu jirin is-marin waaga siyaasiyiinta.
“Haddii la doonayo ama laga shaqeynayo danta shacabka Soomaaliyeed, laguma mashquuli laheyn halka shirka doorashada lagu qabanayo. Haddii dhammaan dhinacyada ay wada aqbalsanyihiin ka qeyb-galka doorashada maxaa la isugu raaci la’yahay madasha lagu qabanayo?” ayuu yiri Maxamed.
Xasan Axmed, oo ka mid ah dhallinyaradda jaamacadda Mogadishu ka barta culuumta siyaasadda, oo Kalfadhi.com uga warbixinayay aragtidiisa ku aadan shirka ayaa maamulada Puntland iyo Jubbaland ku eedeeyay in aysan rabin in doorasho ay ka dhacdo dalka, iyaga oo dano shisheeye ka hormarinta danta ummadda Soomaaliyeed.
“Mar walba haddii arrin doorasho ama shir iyga ay ku lug leeyihiin lasoo hadal qaado, kuwa cabanayo oo khilaafka wadda waa labada maamulo, qof arrintaasi moog ma jirto” ayuu sii raaciyay hadalkiisa.
Saaxiibadda Soomaaliya ee beesha caalamka ayaa maalin ka hor sheegay, in aan la aqbali karin dib-u-dhac qiil looga dhigayo meesha lagu qabanayo.
Guddomiye ku-xigeenka 1aad ee Golaha Shacabka oo maanta gaaray magaalada Baydhabo
Baarlamaanka Jaamacadda Carabta oo soo dhoweeyay shirka golaha wada-tashiga Qaranka ee arrimaha doorashooyinka